Teraka ho faty | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny finoana kristiana dia manambara ny hafatra fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga nofo tamin'ny toerana efa voafaritra mialoha sy niara-nonina tamintsika olombelona. Tena niavaka tokoa i Jesosy tamin'ny maha-olona, ​​ary nisy aza nanontany ny maha-olombelona azy. Na izany aza, ny Baiboly dia manantitrantitra fa Andriamanitra tena nofo Izy - nateraky ny vehivavy - olombelona, ​​ka tsy mitovy amin'ny fahotantsika toa antsika amin'ny lafiny rehetra (Jaona 1,14:4,4; Galatiana 2,7; Filipiana 2,17; Hebreo). Olombelona tokoa izy. Ny fananganana an'i Jesosy Kristy dia matetika hankalazaina amin'ny Krismasy, na dia nanomboka tamin'ny fitondrana vohoka tamin'i Maria aza izany, araka ny fandaharam-potoana nentina tamin'ny 25 martsa, ny fetin'ny fankalazana. (nantsoina taloha koa ny fetin'ny fahatongorana ho nofo na nofo nofo Andriamanitra).
Kristy Ilay nohomboana
Noho ny maha-zava-dehibe ny finoantsika fa mety ho ny fahaterahan'i Jesosy sy ny nahaterahan'i Jesosy dia tsy izy ireo no loha laharana amin'ny hafatry ny finoana izay entintsika eto amin'izao tontolo izao. Rehefa nitory tany Korinto i Paoly dia nanambara hafatra lavitra fihantsiana kokoa izany: an'i Kristy nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana (1 Korintiana 1,23).
Ny tontolo Grika-Romana dia nahalala tantara maro momba an'Andriamanitra izay nateraka, saingy mbola tsy nisy nahare momba ny nohomboana tamin'ny hazo fijaliana iray. Mahatsiravina izany - toy ny fanomezana famonjena ny olona raha tsy mino afa-tsy mpanao heloka bevava fotsiny izy ireo. Ahoana anefa no ahafahana navotan'ny jiolahy?
Na izany aza, izany no zava-dehibe indrindra - ny Zanak'Andriamanitra dia nanana fahafatesana mahamenatra teo amin'ny hazo fijaliana toy ny mpanao heloka bevava ary avy eo izy dia nahazo voninahitra tamin'ny alàlan'ny fitsanganana amin'ny maty. Nohazavain'i Petera tamin'ny filankevitra avo: "Andriamanitry ny razantsika no nanangana an'i Jesosy ... Andriamanitra nanangana azy tamin'ny tanany ankavanana ho andriana sy mpamonjy hanome ny Isiraely fibebahana sy famelan-keloka" (Asan’ny Apostoly 5,30: 31). Natsangana tamin'ny maty Jesosy ary nasandratra hanavotra ny fahotantsika.
Na izany aza, i Piera dia tsy nahomby niditra tamin'ilay ampahany mahamenatra ilay tantara: "... izay nihantona teo amin'ny hazo sy namonoanao". Ilay teny hoe "kitay" dia tsy isalasalana fa nampahatsiahy ireo mpitarika ny finoana jiosy mikasika ireo teny ao amin'ny Deoteronomia 5:21,23: "... voaozona ny olona nahantona."
Ouch! Fa maninona no voatery nampakatra an'izany i Petera? Tsy nanandrana nanisy soritra teo amin'ny tehezan'ny socio-politika izy, fa kosa nampidiriny am-pitandremana ity lafiny ity. Ny hafatra nentiny dia tsy hoe hoe maty Jesosy, fa tamin'ity fomba tsy mahamenatra ity. Tsy ampahany amin'ny hafatra ihany io, fa koa ny hafatra lehibe. Rehefa nitory tany Korinto i Paoly dia ny fanentanana lehibe indrindra teo amin'ny fitoriana nataony dia tsy ny hahafantarany ny fahafatesan'i Kristy fotsiny, fa ny hahitany ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. (1 Korintiana 1,23).
Tany Galatia, mazava ho azy fa nampiasa fomba mazava kokoa: "... izay nataon'i Jesosy Kristy nohosorana teo imason'ny Ilay nohomboana" (Galatiana 3,1). Fa maninona no nahatonga an'i Paoly hanantitrantitra loatra ny fahafatesana mahatsiravina tokoa izay hitan'ny Soratra Masina ho mariky ny fanozonana an'Andriamanitra?
Tena nilaina ve izany?
Fa maninona no tsy maintsy niaritra fahafatesana mahatsiravina toy izany i Jesosy? Azo inoana fa efa nandinika an-tsipiriany momba io fanontaniana io i Paoly nandritra ny fotoana ela. Izy dia nahita ilay nitsangana tamin'ny maty ary fantany fa Andriamanitra no naniraka ny olona tao amin'io lehilahy io. Nefa nahoana Andriamanitra no tokony hamela an'io voahosotra io ho faty amin'ny fahafatesana izay heverin'ny Soratra Masina ho ozona? (Koa ny Silamo dia tsy mino fa nohomboana i Jesosy. Teo imason'izy ireo dia mpaminany, ary tsy ho navelan'Andriamanitra hitranga aminy izany andraikitra izany raha tsy hoe Jesosy Service.)
Eny tokoa, Jesosy nivavaka tao amin'ny zaridainan'i Getsemane mba hisy fomba hafa ho azy, fa tsy misy. Heroda sy Pilato fotsiny no nanao izay efa notendren'Andriamanitra ho tonga voalohany - izany dia ny hahafaty azy amin'izany fomba voaozona izao (Asa 4,28; Baiboly Zurich).
Nahoana? Satria Jesosy ho antsika dia noho ny fahotantsika - dia voaozona isika noho ny fahotantsika. Na ny fanararaotana kely nataontsika aza dia ny fanomboana amin'ny hazo fijaliana eo imason'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Voaozona daholo ny zanak'olombelona rehetra satria meloka ny ota. Nefa ny vaovao tsara, ny filazantsara dia mampanantena hoe: "Fa i Kristy kosa dia nanafaka antsika tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga ozona ho antsika Izy" (Galatiana 3,13). Jesosy dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tsirairay. Noraisiny ny fanaintainana sy ny henatra tokony ho zakaintsika.
Tsy izany ihany anefa no ampitain'ny Baiboly antsika, ary i Paul ihany no miresaka an'io fomba fijeriny io ao anatin'ny iray amin'ireo taratasiny. Matetika kokoa noho ny tsy izy, dia niteny tsotra fotsiny izy hoe "maty ho antsika" i Jesosy. Raha vao jerena aloha, ny fehezanteny voafidy eto dia toa fifanakalozana tsotra fotsiny: mendrika ny ho faty isika, natolotr'i Jesosy ny ho faty an-tsitrapo ho antsika, ary noho izany dia tsy voavonjy isika.
Na izany aza dia tsy tsotra izany. Ny antony voalohany, isika olombelona dia mbola maty ihany. Ary miaraka amin'ny fomba fijery hafa dia maty miaraka amin'i Kristy isika (Romana 6,3-5). Taorian'io fampitahana io dia solontenantsika roa ny fahafatesan'i Jesosy (izy dia maty teo amin'ny toerana misy antsika) ary koa mpandray anjara (izany dia mizara amin'ny fahafatesany isika amin'ny fahafatesany miaraka aminy); izay mahatonga mazava ho azy hoe inona no zava-dehibe: avotra amin'ny hazofijalian'i Jesoa isika, hany ka tsy vitan'ny fahitana ny hazofijalian'i Kristy ihany isika.
Mampiasa ny vidim-panavotana hafa nofidin'i Jesosy koa ny fampitahana: "... ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa hanompo sy hanome ny fiainany ho avotra ho an'ny maro" (Marka 10,45). Toy ny hoe nosamborin'ny fahavalo isika ary ny fahafatesan'i Jesosy dia nanome antsika fahafahana.
Manao fampitahana mitovy amin'izany i Paoly amin'ny filazana fa vidiana malalaka isika. Ity teny ity dia mety mampahatsiahy ny mpamaky sasany ny tsenan'ny andevo, ny sasany angamba ny Israelita nandao an'i Ejipta. Azo nividy tsy andevozana ny andevo, ary toy izany koa ny zanak'Israely dia nividy ny Israelita avy tany Ejipta. Nalefan'ilay Raintsika any an-danitra antsika tamin'ny fandefasana ny zanany lahy. Nandray ny sazin'ny fahotantsika Izy.
Ao amin'ny Kolosiana 2,15, sary iray hafa dia ampiasaina ampiasaina amin'ny fampitahana: «... natolony tanteraka ny fahefana sy ny fahefana ary naseho azy ireo. Tao aminy [teo amin'ny hazo fijaliana] no nahazoany fandresena azy » (Baiboly Elberfeld). Ny sary voasoritra eto dia maneho ny filaharan'ny fandresena: ny mpitarika ny tafika dia nandresy ny gadra voafonja sy nanala baraka azy tao an-tanàna. Io andalana io amin'ny taratasy ho an'ny Kolosiana dia manazava tsara fa tamin'ny nanomboana an'i Jesoa Kristy dia nanapaka ny herin'ny fahavalony rehetra ary nandresy antsika ho antsika.
Ny Baiboly dia manome antsika ny hafatry ny famonjena amin'ny sary fa tsy amin'ny endrika finoana tsy miova ary tsy miova. Ohatra, ny fahafatesan'i Jesosy ho sorona dia tsy amin'ny iray amin'ireo sary marobe ampiasain'ny Soratra Masina fotsiny mba hanazavana ny foto-dehibe. Tahaka ny mamaritra ny ota amin'ny fomba maro samihafa, ny asan'i Jesosy hanavotra ny fahotantsika dia azo aseho amin'ny fomba hafa. Raha raisintsika ho fanitsakitsahana ny lalàna ny ota dia hitantsika fa eo amin'ny hazo fijaliana no fihetsika fa tsy fanasaziana. Raha hitantsika fa fanitsakitsahana ny fahamasinan'Andriamanitra izany, hitantsika ao amin'i Jesosy ny sorompanavotana natao ho azy. Raha manimba antsika izany, ny ran'i Jesosy dia mandro antsika ao. Raha mahita ny tenantsika ho resy isika, dia Jesosy no Mpanavotra antsika, mpanafaka maharesy. Rehefa mamboly fankahalana izy ireo dia mitondra fampihavanana i Jesosy. Raha hitantsika izany fa mariky ny tsy fahalalana na hadalana, dia i Jesoa no manome fahazavana sy fahendrena ho antsika. Ireo sary rehetra ireo dia fanampiana antsika.
Azo esorina ve ny fahatezeran'Andriamanitra?
Ny tsy fahatokisan-tena dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra, ary ho "andro fahatezerana" izay hitsarany an'izao tontolo izao (Romana 1,18; 2,5). Ho sazina izay “tsy manaiky ny marina” (Andininy 8). Tian'Andriamanitra ny olona ary aleony hahita azy ireo miova, fa manasazy azy ireo izy ireo raha manohitra azy tsy tapaka. Izay manalavitra ny tenany amin'ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavana dia handray ny sazy.
Tsy toa ny olona tezitra izay tsy maintsy tony aloha vao afaka mampitony izy dia tia antsika ary mahatoky fa azo avela ny helokay. Noho izany dia tsy nopotehina fotsiny izy ireo, fa nafindra tany amin'i Jesosy niaraka tamin'ny voka-dratsy marina. "Izy no nanao ny tsy nahalala ota ho ota ho antsika" (2 Korintiana 5,21; Baiboly Zurich). Jesosy dia lasa ozona ho antsika, tonga ota ho antsika izy. Tahaka ny namindrana ny helontsika taminy, ny fahamarinany no niantefa tamintsika "mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika" (ny andiny). Nomen'Andriamanitra fahamarinana ho antsika isika.
Ny fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra
Mampiharihary ny fahamarinan'Andriamanitra ny filazantsara - fa marina ny mamela heloka antsika fa tsy hitsara antsika (Romana 1,17). Tsy mandà ny fahotantsika izy, fa mikarakara azy ireo miaraka amin'ny hazofijalian'i Jesoa Kristy. Ny hazo fijaliana dia mariky ny fahamarinan'Andriamanitra (Romana 3,25: 26) ary koa ny fitiavany (5,8). Mijoro ho an'ny fahamarinana izany satria mampiseho tsara ny sazin'ny ota amin'ny fahafatesana, saingy amin'ny fotoana mitovy amin'ny fitiavana satria mamela heloka ilay mamela heloka.
Jesosy dia nandoa ny vidin'ny fahotantsika - ny vidin'ny tena manokana amin'ny endrika fanaintainana sy menatra. Nahazo fampihavanana izy (famerenana indray ny vondron'olona manokana) amin'ny alàlan'ny hazofijaliana (Kolosiana 1,20). Na dia fony mbola fahavalontsika aza izy, dia maty hamonjy antsika (Romana 5,8).
Ny fahamarinana dia mihoatra noho ny fanarahana lalàna. Ilay Samaritana mamindra fo dia tsy nankatò lalàna izay nitaky azy hanampy ny naratra, fa nanao ny tsara izy tamin'ny fanampiana.
Raha manam-pahefana hamonjy olona milomano isika, dia tsy tokony hisalasala hanao izany. Ary toy izany koa tamin'ny herin'Andriamanitra namonjy tontolo mpanota, ary nanao izany tamin'ny nanirahana an'i Jesosy Kristy izy. «... dia ny fampihavanana ny fahotantsika, tsy ho antsika ihany, fa natao koa ho an'izao tontolo izao» (1 Jaona 2,2). Maty ho antsika rehetra izy, ary nataony mihitsy aza "na dia mbola mpanota aza isika".
Ny famindrampon'Andriamanitra amintsika dia mariky ny fahamarinany. Manao ny rariny izy amin'ny fanomezana antsika fahamarinana na dia mpanota aza isika. Nahoana? Satria nataon'i Kristy ho fahamarinantsika izy (1 Korintiana 1,30). Koa satria tafaray amin'i Kristy isika, dia tonga aminy ny fahotantsika ary azontsika ny fahamarinany. Tsy avy amin'ny tenantsika ny fahamarinana, fa avy amin'Andriamanitra sy omena antsika amin'ny alalàn'ny finoantsika (Filipiana 3,9).
"Fa ny fahamarinana no lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino. Satria tsy misy fahasamihafana eto: samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manana voninahitra izay tokony hananany miaraka amin'Andriamanitra, ary tsy misy fahamendrehana manao ny rariny ho an'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny famonjena izay tonga tamin'i Kristy Jesosy. Nanangana izany ho finoana ho avotra amin'ny rany Andriamanitra mba hanaporofo ny fahamarinany amin'ny famelana ny fahotana izay natao taloha tamin'ny fotoam-paharetany, mba hanaporofoana ny fahamarinany amin'izao fotoana izao fa marina sy marina izy ataovy ilay iray izay amin'ny finoana an'i Jesosy » (Romana 3,22-26).
Ny Sorompanavotan'i Jesosy dia natao ho an'ny rehetra fa izay mino azy ihany no hahazo fitahiana miaraka amin'izany. Izay manaiky ny marina ihany no mahazo fahasoavana. Ekentsika ny fahafatesany ho antsika (ho toy ny fahafatesana niaretany fa tsy antsika, izay andraisanay anjara); ary tahaka ny saziny, dia manaiky ny fandreseny sy ny fitsanganany amin'ny maty ho antsika isika. Ka Andriamanitra marina ho azy - be famindram-po sy marina. Ny fahotana dia tsy jerena tahaka ny an'ny mpanota ihany. Ny famindram-pon'Andriamanitra dia mandresy ny fitsarana (Jakoba 2,13).
Tamin'ny alalan'ny hazofijaliana, i Kristy dia nampihavanin'izao tontolo izao rehetra (2 Korintiana 5,19). Eny, mihavana amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny hazofijaliana izao tontolo izao (Kolosiana 1,20). Ny famonjena dia nomena amin'ny zavaboary rehetra avy amin'ny nataon'i Jesosy! Mihoatra noho izay rehetra iarahantsika amin'ilay teny hoe famonjena, sa tsy izany?
Ny faran'ny farany dia voavonjy amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Eny, izany no nahatonga azy ho hena. Mba hitarika antsika hankalaza voninahitra, dia sitrak'Andriamanitra ny namelan'i Jesosy hijaly sy ho faty (Hebreo 2,10). Satria te hanavotra antsika izy, dia tonga toa antsika; satria tamin'ny alàlan'ny fahafatesany ho antsika no hamonjeny antsika.
"Ankehitriny, ny zanaka dia nofo aman-drà, nanaiky izany ihany koa izy, ka amin'ny fahafatesany dia hanala ny fahefana hiala amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly ary manavotra ireo izay matahotra ny fahafatesana amin'ny ankapobeny. Tsy maintsy nanompo ny fiainana » (2,14-15). Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia nijaly ho antsika tsirairay i Jesosy (2,9). "... I Kristy indray mandeha nijaly noho ny ota, ny marina ho an'ny tsy marina, ka nitarika anao tamin'Andriamanitra ..." (1 Petera 3,18).
Manome antsika fahafahana maro ny Baiboly hisaintsaina ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Azo antoka fa tsy azontsika amin'ny antsipiriany hoe ahoana no ifandraisan'ny zava-drehetra. Satria maty izy dia afaka mizara fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra.
Farany, tiako ny maka endrika hafa amin'ny hazo fijaliana - ny an'ny modely:
«Tao anatin'izany no nisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra teo amintsika, dia nandefa ny Zanany lahitokana ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra, mba hiaina amin'ny alalany. Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika sy nandefa ny zanany lahy ho avotra amin’ny fahotantsika. Ry malala, raha nitia antsika Andriamanitra dia tokony hifankatia koa isika » (1 Jaona 4,9: 11).